Le yindlela i-Apple ekwazile ngayo ukuphelisa ukupakishwa kweplastiki kwe-iPhone 13 | IPhone iindaba
Le yindlela i-Apple ekwazile ngayo ukuphelisa ukupakishwa kweplastiki kwe-iPhone 13
Ingelosi Gonzalez | 17/09/2021 18:11 | iPhone 13, Izaziso
Ukusukela ngo-2018 i-Apple ibeyinkampani engathathi hlangothi kwikhabhoni kwinqanaba lokusebenza kwehlabathi. Nangona kunjalo, injongo kukuba nemveliso yeemveliso zayo ayizukuthatha carbon ngaphambi konyaka wama-2030. Yiyo loo nto umsebenzi omkhulu wenziwa nokuzama ukuqinisekisa ukuba iimveliso zinefuthe elincinci kwindalo ngokukhuthaza ukuhlaziywa kunye nokurisayikilisha izixhobo. Kwi ingcaciso yokugqibela bakuxele oko i-iPhone 13 kunye ne-iPhone 13 Pro ngekhe ibenokupakishwa kweplastiki okungagcina iitoni ezingama-600 zeplastiki. Nangona kunjalo, amathandabuzo malunga nokuba iya kuba yintoni loo nto iphakhejiweyo kwaye siza kuqinisekisa njani ukuba ayivulwanga sele isonjululwe. Le yipakethe entsha ye-iPhone 13.
Isincamathelisi sikuvumela ukuba ususe ipakethi yeplastiki kwi-iPhone 13
Iivenkile zethu, iiofisi kunye nedatha kunye namaziko okusebenza sele engathathi cala kwikhabhoni. Kwaye ngo-2030 ziya kuthi ke iimveliso zethu kunye nekhabhoni yakho xa usisebenzisa. Kulo nyaka sisuse isongelo seplastikhi kwityala le-iPhone 13 kunye ne-iPhone 13 Pro, sigcina iitoni ezingama-600 zeplastiki. Kwaye izityalo zethu zendibano zokugqibela azithumeli kwanto kwindawo yokugcwalisa umhlaba.
Isitshixo sokubhengezwa kukaTim Cook kunye neqela lakhe kwintetho ephambili ngoSeptemba 14 yayikwiindaba ezinxulumene nokusingqongileyo. Kuya kufuneka sithathele ingqalelo injongo ka-Apple yokuba ngo-2030 kokubini ukusebenza kwehlabathi kunye nokudalwa kwemveliso akukho khabhoni. Ukwenza oku, izixa ezikhulu zemali kufuneka zityalwe ekuququzeleleni ukwenziwa ngokutsha kweemveliso kunye nokusebenzisa izinto ezinokuhlaziywa kwezixhobo ezitsha.
Olu luthelekiso phakathi kweebhetri zalo lonke uluhlu lwe-iPhone 13
Kwimeko ye-iPhone 13, i ukususwa kwepakethi yeplastiki egubungela ibhokisi. Le nto yayineenjongo ezimbini. Okokuqala, khusela ibhokisi. Okwesibini, ukuqinisekisa ukuba imveliso ayikavulwa ngaphambi kokufikelela ezandleni zomsebenzisi. Kwaye ubuya kukwazi njani ukwenza ipakethe eza kuqhubeka nokugcina le ndawo yokugqibela ngaphandle kokusebenzisa iplastiki engaka?
Ibhokisi ye-iPhone 13 pic.twitter.com/NJfP37hFFP
-UDuanRui (@ duanrui1205) Septemba 17, 2021
Isisombululo sifumaneka kumfanekiso ovele kwi-Twitter apho unokubona ukupakishwa kwe-iPhone 13. Ukuqinisekisa ukuba imveliso ayikavulwa Ukuncamathela okuphezulu ukuya ezantsi kuyilelwe emazantsi ebhokisi, Ukugqitha kwimida emibini emifutshane yokuvula. Ngale ndlela, ibhokisi ihlala ivaliwe ngesincamathelisi ingasuswa kwisilayidi esilula ngokubamba ithebhu iphawulwe ngetolo emhlophe kwimvelaphi eluhlaza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iifowuni zePhone » iPhone 13 » Le yindlela i-Apple ekwazile ngayo ukuphelisa ukupakishwa kweplastiki kwe-iPhone 13
Ngoku unokugcina i-iPhone 13